« Réseau Soa » manohana ny tanora : ampiana handrafitra tetikasa any ambanivohitra ny tanora | NewsMada
Nijoro eto Madagasikara ny « Réseau Soa » (1), nanomboka ny taona 2003. Ahitana sendika 19 mandrafitra azy manerana ny Nosy, miasa ho amin’ny fiarovana ny tombontsoan’ny tantsaha, eo amin’ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Miara-miasa ihany koa amin’ireo minisitera telo : Fambolena, Fiompiana, Jono. Fanadihadiana.
Tsy takona afenina, tratra aoriana ny fampandrosoana ny any ambanivohitra eto Madagasikara, iankinan’ny fambolena sy ny fiompiana, foto-piveloman’ny maro anisa indrindra. Amin’izao fotoana izao, hita mitombo an-daharana indray ireo mponina, indrindra ny tanora avy any ambanivohitra mifindra monina any amin’ny tanàn-dehibe. Eo anatrehan’izany olana rehetra izany, noraisin’ny « Réseau Soa » ny andraikitra tandrify azy amin’ny fiarovana ny tontolo ambanivohitra, indrindra ny fanomezan-danja ny foto-piveloman’ny mponina, ny fambolena sy ny fiompiana, antoky ny fampandrosoana ny firenena.
« Réseau Soa » amin’ny alalan’ny tetikasa “Mampita-Soa” no mamolavola sy mandrafitra ireo tetikasa samihafa, miainga avy any amin’ny fotony, miakatra any amin’ny faritra ary mitambatra manerana ny Nosy. Miantoka ny famatsiana ara-bola io tetikasa “Mampita-Soa” io ny Vondrona eoropeanina ho an’ny faritra Analamanga, Menabe ary Bongolava. Tanora 18 hatramin’ny 35 taona, miisa 16 manaraka izany fiofanana izany ny herinandro lasa teo tao amin’ny EASTA (2) Ambatobe.
Manome fiofanana ny tanora
Nafantoka tsara tao an-tsain’ireo tanora ireo fa miainga avy any aminy aloha ny fampandrosoana fototra. Nomena fiofanana izy ireo, hahay hiaro ny tombontsoany sy hanapariaka izany any amin’ireo tanora namany manerana ny faritra. Mitohy hatrany izany fampiofanana izany. « Mila tanora mandimby sy mandray andraikitra haingana any ambanivohitra ny firenena. Samy raisina avokoa na ireo nivoaka avy amin’ny sekoly teknika na ireo niofana nivantana any amin’izay misy azy », hoy ny filohan’ny « Réseau Soa », Razafindramanga.
Anisan’ny fiofanana nomena azy ireo ny fihariana haingam-pihodina, safidin’ny tanora maro anisa noho izao fahasahiranana ankehitriny izao. Fihariana iray amin’izany ny fiompiana akoho gasy, azo lazaina fa mbola tsy ampy betsaka any amin’ny faritra maro, araka ny fanazavan’ny teknisianina mpampiofana iray.
Réseau Soa : Syndicat des organisations agricoles
EASTA : Ecole d’application des sciences et technique agricoles
Tanora iray, Ratsimarofy Jocelyn, tantsaha mpamboly any Tsiroanomandidy, mahita fahombiazana amin’izay ataony. Mamboly vary SRI izy, niainga avy amin’ny tanimbary 1 ha, nahazoany 4,800 t. Nitohy ihany izany ary mamboly amina tanimbary 1,5 ha, izay nahazoany vokatra 7 t . « Tsy misy ny fatiantoka, saingy olana matetika ny toetr’andro, tahaka niseho tamin’ny taona 2015 », hoy izy. Amin’izao fotoana izao, nitariny any amin’ny ombivavy beronono ny tombony azony tamin’ny voka-bary ary mieritreritra ny mbola hanampy izany ny tovolahy sy hamboly hazo fihinamboa, toy ny letisia, izay mety tsara any amin’iny faritra iny, voasary, manga…
Tovovavy iray, Ramanantenasoa Dina Harimbola, mpiofana, taona faharoa, ao amin’ny « Ny Fivoarantsika », Manjakandriana. « Faniriako sy tiako ny mitrandraka ny tontolo ambanivohitra », hoy izy. Efa mampihatra ny fianarany amin’ny tanin-dray aman-dreniny aloha izy izao amin’ny fambolena legioma. « Ny olana anefa, mora ny vokatra raha amidy any ambanivohitra. Koa raha voly manara-penitra hahazoam-bokatra tsara amin’ny kalitao, tsy maintsy hitadiavana tsena hafa mba tsy hamono antoka », hoy izy. Mihevitra ny hanokatra fiompiana akoho gasy ihany koa i Dina.
Nanatontosa : R.Mathieu